Wabeeffannoowwan, galmee qeenxee keessatti, dubbisaalee barruu iftaa'anii fi wantootatti akka ceenu nu gargaaru. Wabeeffannoon galtee fi wabii kan akka dirreewwaniitti galmee keessatti saagamu.
Wantootni godayyaawwanni fi torbarruuwwan waliin akka galteetti fayyaduu danda'u.
Wabeeffannaa galchuu keen dura, barruu kee keessatti galteewwan adda baasuu qabda.
Barruu akka galtee wabeeffannaaf fayyadamuu barbaaddu filadhu.
Saagii - Wabeeffannaa filadhu.
Akaakuu tarree, “Wabii Qindeessuu”n filadhu.
Galtee sanduuqa Maqaa keessatti maqaa barreessi. Barruun filatame sanduuqa Gatii keessatti mul'ata.
Saagii cuqaasi. Maqaan galtee tarree Filannoo tti dabalama.
Qaaqa bani jedhu gad-dhiisiiti gara kutaa itti aanuutti ce'i.
Galteetti wabeeffannaa uumuuf
Barruu keessatti bakka wabeeffannaa saaguu barbaaddutti qaree qubachiisi.
Yoo qaaqni duraan banamee hin jiru ta'e, qaaqa banuuf Saagii - Wabeeffannaa filadhu.
Tarree Akaakuu keessaa, "Insert Reference" filadhu.
Tarree Filannoo keessaa, galtee wabeessuu barbaaddu filadhu.
Tarree Wabii itti saagi keessaa, Wabeeffannaaf dhangii filadhu. Dhangiin dhangii akaakuu odeeffannoo akka wabeeffanaatti mul'atu adda baasa. Fakkeenyaaf, "Wabiin" barruu galtee saaga, fi "Fuulli" lakkoofsa fuulaa bakkatti galteen argamu saaga.
Yeroo xumuramu Cufi cuqaasi.
Wantoota hedduu galmee ke keessa jiran kan akka saxaatoo, wantoota fakkaasaa, wantoota OLE, fi gabateewwan, hanga isaan qabii qabanitti wabeessuu ni dandeessa. Goodayyaa wantatti dabaluuf, wanticha filadhu, sana booda Saagi - qabii filadhu.
Galmee keessatti iddoo wabeeffannaa saaguu barbaaddu cuqaasi.
Tarree Akaakuu keessaa, qabii akaakuu wantichaa filadhu.
Tarree Filannoo keessaa, lakkoofsa qabii wanta wabeessuu barbaadduu filadhu.
Tarree Wabii itti saagi keessaa, dhangii wabeeffannaa filadhu. Dhangiin akaakuu odeeffannoo akka wabeeffannaatti mul'atu adda baasa. Fakkeenyaaf, "Reference" akaakuu qabii fi barruu qabii wantichaa saaga.
Title is: Waabeffannoowwan Saaguu